Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo ku Dhawaaqday Hir Gelinta Barnaamijka Gudbinta Xirfadaha |
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo ku Dhawaaqday Hir Gelinta Barnaamijka Gudbinta Xirfadaha
Hargeisa(GNN):-Hay’adda shaqaalaha dawlada somaliland ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso barnamaijka gudbinta xirfadaha kala duwan.
War saxaafadeed ka soo baxay hay’adda shaqaalaha oo uu ku saxeexan yahay gudoomiyaha hay’addaasi ayaa lagu sheegay in si deg deg ah loo bilaabayo barnaamijkan oo faa,iido u yeelan doono dadka xirfadlayaasha ah.
Warsaxaafadeedka ka soo baxay hay’adda shaqaalaha somaliland oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Hadhwanaagnews ayaa u dhignaa sidan:-
Sida aynu la wada socono Hay’adda Shaqaalaha Dawladdu waxa ay u taagan tahay qoridda, horumarinta, tayaynta iyo maamulidda shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Somaliland. Iyada oo laga shidaal qaadanayo awoodda dastuur ee hay’adda iyo kor u qaadidda aqoonta
iyo tayada shaqaalaha ayaa hay’addu waxa ay muddaba wadday wada tashiyo ku saabsan sidii looga faa’iidaysan lahaa dadka aqoonta iyo xirfadaha leh ee reer Somaliland ee ka imanaya debedaha isla markaana muddo gaaban joogaya dalka. Dadkaasi waxa ay inta badan jecel yihiin in ay dalkooda hooyo uga faa’iideeyaan wakhtiga ay joogaan nasiibdarrose ma helaan tilmaan iyo ciddii isu xilqaami lahayd inay uga faa’iideeyaan dalka, taasina waxay keentaa in ay sidaa ku noqdaan iyada oo aan laga faa’idaysan.